Vinyl Printing & Advertising
စီးပွားရေး ကြော်ငြာ ဆိုင်းဘုတ် ဝန်ဆောင်မှု့ များ ( Advertising Servises Billboard )
လူကြီးမင်းတို့ ၏ စီးပွားရေး လုပ်ငန်း ကြော်ငြာ Sign Board
ကွညျ့ရှု့သူ အရအေတှကျ : 912 view counts
ပုံနှိပ် ကြော်ငြာ ဝန်ဆောင်မှု့ လုပ်ငန်း ( Digital Photocopier Service )
Model : Photocopier
လုပျငနျးအမညျ : Cho Advertising & Silk Screen Printing Unverified Member
ဖုနျးနံပါတျ : 01-559308, 544430, 09-5113603
အသုံးပြုသောနေရာ : ကြော်ငြာခြင်း နှင့် ဝန်ဆောင်မှု့ လုပ်ငန်း
Duty cycle : Up to 120, 000 impressions/month
Image server memory : 128 mb standard + 5. 1gb hard disk drive
Max copy reservation :5jobs
Pprinting resolution : 600 dpi x 600 dpi
Scanning resolution : 600 dpi x 600 dpi
Legal : 14 cpm/ppm
Ledger : 16 cpm/ppm
First copy time : 6.6seconds (from
Maximum original size : 11" x 17"
Standard paper capacity :2x 500 sheets
Manual bypass : 50 sheets
Maximum paper capacity : 4, 550 sheets
Type : digital photocopy
Colour : Natural colour , white colour
CHO ဗီနိုင်းကြော်ငြာ၊ ကွန်ပျူတာ ပန်းထိုး ပုံနှိပ် နှင့် တံဆိပ်ရိုက်လုပ်ငန်းမှ လူကြီးမင်းတို့အတွက် လိုအပ်သောအချက်လက် စာရွက် စာတမ်းများကို မိတ္တူ ဖြူ/မဲ ကာလာစုံ ထုတ် ခြင်း၊ လေဆာကာလာ ဖြင့်ပုံထုတ်ခြင်း ၊ ကွန်ပျူတာ စာစီ စာရိုက်လုပ်ပေး ခြင်း ၊ ပလတ်စ တစ် လောင်းခြင်း နှင့် အဆင့်မြင့် စာအုပ် ချုပ်ခြင်း များကို Cannon အမှတ်တံဆိပ် Digital Photocopier စက်ဖြင့် လူကြီးမင်းတို့ စိတ်တိုင်းကျ ပြု လုပ်ဝန်ဆောင်မှု့ ပေးလျက် ရှိပါသည်။ လူကြီးမင်းတို့ ၏ လိုအပ် ဓာတ်ပုံ၊ စာရွက်စာတမ်း ၊ စာအုပ်ချုပ်ပေးခြင်း များကို လူကြီးမင်းတို့ စိတ်တိုင်းကျ နောက်ဆုံးပေါ် Digital Photocopier စက်ဖြင့် ပြု လုပ်ပေး လျက်ရှိပါသည်။ ဒါ့ကြောင့်လူကြီးမင်းတို့ အနေဖြင့် ၄င်း စက်ဖြင့် မိတ္တူ ကာလာစုံ ကူးခြင်း ၊ ပလတ်စတစ်လောင်းခြင်း နှင့်လေဆာကာ လာပုံထုတ်ခြင်းတို့ ကို အသုံးပြု လိုပါက CHO ဗီနိုင်းကြော်ငြာ၊ ကွန်ပျူတာ ပန်းထိုးပုံနှိ်ပ် နှင့် တံဆိပ်ရိုက် လုပ်ငန်းကို ဆက်သွယ် မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
လူကြီးမင်းတို့ အတွက် Cho ကုမ္ပဏီမှ Company Promotion Girls Uniform အတွက် မိမိ brand ကိုပေါ် လွင် စေရန် Design များကို တစ်ထပ်တည်းကျအောင် ရိုက်နှိပ်ပေးနိုင်ပါသည်။ ထို့ ပြင် စားပွဲခင်း၊ ခန်းဆီးလို က်ကာ ပိတ်ထိုင်ခုံ အလှဆင်ပိတ်၊ Apron စသည့်ဖြင့် လိုအပ်သည့် နေရာ တွင် ရိုက်နှိပ် အသုံးပြု နိုင်ပါ သည်။နိုင်ငံတော် အခမ်းအနားများ၊ အစည်းအဝေးများနှင့် မြို့ တွင်း အဆောက်အဦး နံရံများ တွင် အလံကြီး များ ပုံများကို စိတ်တိုင်းကျ ပုံစံများဖြင့် ချိတ်ဆွဲ အလှဆင်နိုင်ပါသည်။ ဒါ့ပြင် ပြဇာတ် ဂီတ ရုပ်ရှင် အနုပညာ အားကစားအဖွဲ့ လိုက် တူညီဝတ်စုံများကို နှစ်သက်ရာ ဒီဇိုင်း ပန်းကနုတ်များဖြင့် တစ်ထည်ချင်းဖြစ်စေ ၊ အများဖြစ်စေ အော်ဒါပေးရိုက်နှိပ် နိုင်ပါသည်။ ဒါ့ကြောင့်လူကြီးမင်းတို့ အနေဖြင့် ဗီနိုင်း ကြော်ငြာ ၊ ကွန်ပျူတာ ပန်းထိုး ပုံနှိပ်နှင့် တံဆိပ်ရိုက်ခြင်းများကို လုပ်ဆောင်လိုပါက Cho Advertising & Silk Screen Printing ကုမ္ပဏီကို တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ် နိုင်ပါသည်။
For ပုံနှိပ် ကြော်ငြာ ဝန်ဆောင်မှု့ လုပ်ငန်း ( Digital Photocopier Service )
May I get the quotation for "ပုံနှိပ် ကြော်ငြာ ဝန်ဆောင်မှု့ လုပ်ငန်း ( Digital Photocopier Service )" ?